ဧရာဝတီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း (အပိုင်း ၁)
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးက တောငျသူတှေ ဝငျငှတေိုးအောငျနဲ့ လယျယာကဏ်ဍ တိုးတကျဖှံ့ဖွိုးအောငျ လုပျဆောငျမှုတှေ အခုခြိနျမှာ ဘယျလောကျထိ အောငျမွငျခရီးရောကျနပေါပွီလဲ။ တိုငျးဒသေကွီး အစိုးရရုံးစိုကျရာ ပုသိမျမွို့မှာ ဝနျကွီးခြုပျဦးလှမိုးအောငျ,ကို၊ ကိုဇျောဝငျးလှိုငျ တှဆေုံ့မေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ ဝနျကွီးခြုပျကိုယျတိုငျ လယျယာမွကေဏ်ဍနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ အတတျပညာကို သငျယူခဲ့တဲ့လူလညျး ဖွဈတယျ။ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး လှတျတျောထဲမှာ ကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ အတှအေ့ကွုံတှရှေိခဲ့တော့ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ဝနျကွီးခြုပျမိနျ့ခှနျးထဲမှာ ပွောသှားတာကို ကနြျောတို့ တှရေ့တယျ။ ဆိုတော့ ဧရာဝတီတိုငျးဟာလညျး မွနျမာနိုငျငံမှာ စပါးအထှကျဆုံးဒသေ ဖွဈတယျ။ မွနျမာပွညျရဲ့ စပါးကြီဆိုပွီးတော့လညျး တငျစားပွောဆိုကွတယျ။ လယျယာကဏ်ဍဟာ အငျမတနျအရေးကွီးတယျ။ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျပဲ ဝနျကွီးခြုပျက ဒီဟာနဲ့ ပတျသကျပွီး စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ဘှဲ့ရထားတဲ့လူလညျး ဖွဈတယျ။ ဒီဟာတှကေို တလြှောကျလုံး လုပျလာတယျဆိုတော့ ပိုပွီးတော့ အလငျြသငျ့သလို ဖွဈသှားတာပေါ့။ ဒီဟာနဲ့ ပတျသကျပွီး ဝနျကွီးခြုပျကိုယျတိုငျ ပွောထားတော့ လယျယာကဏ်ဍ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး၊ လယျသမားတှဘေဝ မွှငျ့တငျရေးကိစ်စမှာ ဝနျကွီးခြုပျ ပွောထားတဲ့အတိုငျး ဘယျလောကျအထိမြား ဝနျကွီးခြုပျ လုပျပေးနိုငျခဲ့ပွီးပွီလဲဆိုတာကို သိခငျြပါတယျ။
ဖွေ ။ ။ ကနြျော တာဝနျယူထားတဲ့ တိုငျးဒသေကွီးအဆငျ့ ဧရာဝတီတိုငျးထဲမှာဆိုရငျ လယျယာစိုကျပြိုးမွေ ဧက (၃၇) သိနျး ရှိပါတယျ။ (၃၇) သိနျးကို ကနြျော စတာဝနျယူတဲ့နှဈမှာပဲ မွမှော ခဉျြငနျဓါတျ ဘယျလောကျရှိလဲ။ အဓိက Major Element ချေါတဲ့ nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) တှဟော ဘယျလောကျ ရာခိုငျနှုနျး ရှိတယျဆိုတာ သိဖို့လိုအပျပါတယျ။ မသိဘဲနဲ့ စိုကျပြိုးနရေငျ အလှယျတကူ ပွောကွမယျဆိုရငျတော့ မှနျးစိုကျပွီးတော့ အလှယျတကူ စိုကျတယျလို့ပဲ ပွောလို့ရမယျ။ ဒီနေ့ သိပ်ပံနညျးကြ စိုကျကွလို့ပွောတဲ့အခါမှာ သိပ်ပံနညျးကဆြိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးက နညျးနညျးလှဲနတေယျလို့ ထငျတယျ။ ကနြျော စိုကျပြိုးရေးကြောငျးဆငျးတဈယောကျအနနေဲ့ ကနြေျာ့အမွငျအရဆိုရငျ ဒါက စပွီးတော့ စိုကျတော့မယျဆိုရငျ ဒီမွမှော မွရေဲ့ PH လို့ချေါတဲ့ ခဉျြငနျဓါတျ ဘယျလောကျရှိလဲ။ နောကျတခါ အဟာရတနျးဖိုးတှေ ဘယျလောကျရှိသလဲဆိုတာတှေ သိဖို့လိုပါတယျ။ သိရငျ မြားရငျ ကနြျောတို့ လြှော့ရမယျ။ လိုအပျရငျ ဖွညျ့ပေးရမယျ။ အဲဒီလိုဖွဈတဲ့အတှကျ စတဲ့နှဈမှာ ဧက (၃၇) သိနျးထဲက ဧက (၉) သိနျးကြျော (၁၀) သိနျးနီးပါးကို PH စမျးခိုငျးပါတယျ။ NPK စမျးခိုငျးပါတယျ။ စမျးခိုငျးပွီးတော့ တောငျသူ ဧက (၅၀) ကို တဈကှကျ၊ တဈခါစမျးတယျ။ အဲဒီတောငျသူတှမှော PH ဘယျလောကျရှိလဲ။ သူတို့မွေ ဧက (၅၀) က Detail တဈဧကခငျြးတော့ မဖွဈနိုငျဘူး။ ဧက (၅၀) ကို Focus လုပျလိုကျပွီးတော့ အဲဒီမှာ PH ဘယျလောကျရှိလဲ။ N ဘယျလောကျ၊ P ဘယျလောကျ၊ K ဘယျလောကျ ရှိသလဲဆိုတာကို စာအုပျလေးထဲမှာ ရေးပေးပါတယျ။ မှတျတမျးပွုပွီး PH နညျးနတေယျဆိုရငျ neutral point က PH 7. ကို မရောကျဘူးဆိုရငျ ဘယျလို Treatment ပေးရမယျဆိုတာကိုလညျး Instruction တဈခါတညျး ပေးထားပါတယျ။
NPK မှာလညျး --နညျးနရေငျ ဘာလုပျပါ။ မြားနရေငျ ဘာလုပျပါ။ အဖွကေ Color လေးတှေ ပါပါတယျ။ အဝါဆိုရငျ သူက Level ဘယျလောကျရှိလဲ။ လိမ်မျောရောငျဆိုရငျ ဘယျလောကျရှိတယျ။ အနီက ဘယျလောကျရှိတယျ။ သူ့ရဲ့ သင်ျကတေလေးတှေ ပါတယျ။ အဲဒီသင်ျကတေပျေါ မူတညျပွီး နညျးနတေယျဆိုရငျ ဘာလုပျပါ။ ဘယျလောကျထညျ့ပါ။ အဲဒါမြိုး ကနြျောက လမျးညှနျပါတယျ။
ကနြျော အခု (၂) နှဈနီးပါး ဖွဈလာတဲ့အခြိနျမှာ ဒီနှဈ ပွီးခဲ့တဲ့နှထေဲက တောငျသူအကုနျလုံး လကျထဲမှာ အဲဒီစာအုပျလေးတှေ ရောကျနပေါပွီ။
အဓိက Main က စပါး။ အဲဒီတော့ ဒီစပါးက လကျရှိအခြိနျ နိုငျငံခွားကို တငျပို့တဲ့အခါမှာ ဈေးကောငျးမရဘူး။ မနှဈကဆိုရငျ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဆနျတနျခြိနျ ၃.၆ သနျးကို တရုတျက ဝယျခဲ့တယျ။ ဒီနှဈ မဝယျတော့ဘူး။ အဲဒီလို မဝယျတော့ တရုတျပဲ ရောငျးမှာလား။ ကနြျောတို့က ဒီအပွငျနိုငျငံတှကေိုလညျး ရောငျးခမြယျ။ အဲဒီတော့ ဈေးကှကျရှာတဲ့နရောမှာ ဘာအရေးကွီးလဲဆိုရငျ ပစ်စညျးအရညျအသှေး အရေးကွီးတယျ။ အရညျအသှေးကောငျးမှ ရောငျးရတော့မှာ။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ ဝနျကွီးခြုပျတို့ တိုငျးဒသေကွီးအစိုးရကနေ တောငျသူတှကေို ဖွနျ့ထားတဲ့ လမျးညှနျ၊ လမျးပွမွပေုံလို စာအုပျကလေး၊ ညှနျကွားခကျြစာအုပျကလေးတှအေပျေါ တောငျသူတှေ ပိုပွီးသိရှိနားလညျအောငျ Awareness သူတို့ဘကျက ပိုပွီးလိုကျနာနိုငျအောငျ ဝနျကွီးခြုပျတို့ ဖွဈစခေငျြတဲ့ ပုံစံအတိုငျး၊ စနဈတကြ လိုကျနာနိုငျအောငျ၊ ဝနျကွီးခြုပျပွောတယျ - ဝနျကွီးခြုပျ သှားရငျလာရငျနဲ့ ပွညျသူတှနေဲ့ တှရေ့ငျနဲ့ ပွောပွတာတှရှေိတယျ။ သကျဆိုငျရာလူကွီးတှေ သှားရငျလာရငျနဲ့လညျး ပွောပွတာရှိတယျ။ ဒါပမေဲ့လဲ တစုတဝေးတညျး အကုနျလုံး သိရှိနိုငျအောငျ စနဈတကြ Awareness Campaign လိုမြိုး ပုံစံမြိုးလုပျတာ ရှိသလား။ ဝနျကွီးခြုပျတို့ ဒီဟာကို တောငျသူတှကေ ဘယျလောကျအထိ နားလညျတယျလို့ ပွနျကွားရသလဲ။ သူတို့ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ သိရှိပွီလို့ ဝနျကွီးခြုပျတို့ သိသလား။ အဲဒါက သူတို့ရဲ့ စပါးထှကျလာခွငျးနဲ့ ဝနျကွီးခြုပျတို့ ဖွဈစခေငျြတဲ့ Good Intent တကယျ့စတေနာနဲ့ လုပျပေးတဲ့ဟာရဲ့ ရလဒျက အဲဒီအပျေါမှာ မူတညျနတေယျ။ သူတို့နားလညျခွငျး၊ နားမလညျခွငျးပျေါ မူတညျနတေယျလို့ ထငျမွငျသလား။
ဖွေ ။ ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကနြျောက ဒီလိုလုပျခွငျးက သူနဲ့မွငျ့တဲ့ နညျးပညာတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တောငျသူတှဆေိုတာ မွငျမှ၊ လကျတှပွေ့မှာ ယုံတာဆိုတော့ အခု ဖြာပုံမှာ ပျေါဆနျမှေးဆိုရငျ အဲဒီက တောငျသူတှေ ပွောကွတယျ။ အရငျတုနျးက ပျေါဆနျမှေး ပွနျရပွီ။ အဲဒီတော့ အခွအေနပေေးကွမယျဆိုရငျတော့ ကနြျောတို့ Level တဈခုကိုတော့ တကျလာတယျ။ အဲဒီတော့ ဒီလိုလုပျရငျ ဒီလိုဖွဈရငျ၊ အထှကျတိုးပါလား။ အရညျအသှေး ကောငျးပါလားဆိုတဲ့ Message က တောငျသူတှလေကျထဲ တျောတျောမြားမြားဆီ ရောကျနတေယျ။ အဲဒီလို ရောကျနခြေိနျမှာ ကနြျောတို့က အခုခြိနျမှာ --- သှားမလားဆိုတာ အလှယျတကူ ဖွဈလာတယျ။ ထူးခွားတာက ကနြျောတို့နိုငျငံမှာ စိုကျပြိုးရေးကုမ်ပဏီတှေ အမြားကွီး။ နကျနကျနဲနဲတော့ ကနြျောတို့ သိတာပေါ့။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီစိုကျပြိုးရေးကုမ်ပဏီတှမှော ဘာလဲဆိုတော့ Pre စိုကျပြိုးရေးတှနေညျးတယျ။ Post-harvesting မှာ မြားတယျ။ ဆနျစကျ-အကွောငျးသိတယျ။ အခွောကျခံဖို့ သိတယျ။ နောကျပိုငျးအကွောငျးအရာတှကေို သိတယျ။ ရှပေို့ငျးအကွောငျးအရာတှကေို မသိဘူး။ နောကျဆုံး တကယျလုပျမယျဆိုရငျ ထဲထဲဝငျဝငျလုပျဖို့ Contract Farming Company တျောတျောနညျးတယျ (၅) ရာခိုငျနှုနျး မရှိဘူး။
မေး ။ ။ ဝနျကွီးခြုပျတော့ ကွားဖူးသလား မသိဘူး။ ကနြျော ကွားသိဖူးတာက ထိုငျးနိုငျငံမှာဆိုရငျ Pre-harvesting နဲ့ Post-harvesting တှေ ဝနျကွီးခြုပျ ပွောလို့ပါ။ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာ ကနြျော ကွားဖူးတာက ထိုငျးနိုငျငံမှာဆိုရငျ Pre-harvesting နဲ့ ပတျသကျပွီး စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတှကေ တျောတျောလေး ရငျးနှီးမွုပျနှံကွတယျ။ လယျသမားတှကေို စပါးမစိုကျခငျမှာ ငှထေုတျပေးတယျ။ မြိုးကောငျးရဖို့ကိစ်စတှေ၊ ရကေောငျးရသေနျ့ရဖို့ ကိစ်စတှေ၊ အထှကျတိုးဖို့ကိစ်စတှကေို သူတို့က တျောတျောလေး ရငျးနှီးမွုပျနှံတယျ။ ထှကျလာပွီဆိုရငျလဲ အဲဒီစပါးတှကေို သူတို့ပဲ ပွနျဝယျတယျ။ လယျသမားတှဆေီက ထှကျလာတဲ့ ကောကျပဲသီးနှံကောငျးမှ သူတို့လညျး ဈေးကောငျးနဲ့ နိုငျငံခွားကို ပွနျပွီးတော့ ပို့နိုငျမှာဆိုတော့ သူတို့က အဲဒီနညျးနဲ့သှားကွတယျလို့ ကနြျောသိရတယျ။ ဆိုတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ စောစောက ဝနျကွီးခြုပျပွောသလို မွနျမာနိုငျငံမှာ အားနညျးခကျြရှိနတော Pre-harvesting မှာ ဝနျကွီးခြုပျက မွငျတယျ။ ကိုယျတိုငျလညျး ဒီကဏ်ဍကို သိထားတဲ့လူဆိုတော့ အဲဒီဘကျမှာ ဆိုကွပါစို့ ဧရာဝတီတိုငျးက စံနမူနာပေးပွီး၊ စံပွအနနေဲ့ ဝနျကွီးခြုပျပွောခဲ့သလို ဧက (၅၀) Focus လုပျသလိုမြိုး တတိုငျးလုံးမှာ အထှကျတိုးလာအောငျ လုပျသလိုမြိုး၊ Pre-harvesting ဝနျကွီးခြုပျ အစိုးရက ဦးဆောငျပွီး တခုခုလုပျပွရငျပေါ့။
ဖွေ ။ ။ အခုန ဆရာပွောတဲ့ဟာက ကနြျောပွောတဲ့ ဧကတဈသောငျးလောကျ လုပျနတေယျဆိုတာ Contract Farming လို့ ချေါပါတယျ။ အကြိုးတူလုပျငနျး။ အဲဒီလုပျငနျးမြိုးနဲ့ လုပျကွရငျ သားရှအေိုးထမျးသလိုမြိုး ကုမ်ပဏီနဲ့ တောငျသူအပျေါမှာ သစ်စာရှိရမယျ။ ယုံကွညျမှု ရှိရမယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကုမ်ပဏီက မြိုးစပေ့ေးတယျ။ Inputs တှေ ပေးတယျ။ နောကျတခါ ရတဲ့ဟာကို တောငျသူက မပို့ရဘူး။ ကနြျောတို့လုပျခဲ့တဲ့ Contract Farming ဆိုရငျ အနညျးဆုံး ငါးထောငျဈေး ဖွဈရမယျ။ ကွမျးခငျးဈေး ငါးထောငျပေးမယျ။ ငါးထောငျဈေး ဖွဈနရေငျ ဖွဈဖွဈ၊ မဖွဈဖွဈ ငါးထောငျဈေးကို သတျမှတျထားတယျ။ အဲဒါဆို ငါးထောငျငါးရာဈေးပေးမယျ။ သူနဲ့ ဘယျလောကျပဲတကျတကျ၊ ငါးရာ-ငါးရာ ပိုပေးမယျ။ အဲဒီတော့ သူတို့ Contract လုပျထားတဲ့အတိုငျး ဝယျမယျ။ တောငျသူက သူတို့ကို သစ်စာရှိရှိနဲ့ ရောငျးဖို့ အရေးကွီးတယျ။
မေး ။ ။ ဒီသဘောတူညီခကျြကို မခြိုးဖောကျနဲ့။ တိုငျးဒသေကွီး တဈခုလုံးကို ပွနျကွညျ့မယျဆိုရငျ ဝနျကွီးခြုပျ ဒါတှကေို အစမျးလုပျလာတာ (၂) နှဈကာလသကျတမျး ရှိလာပွီ။ နောကျထပျ (၁) နှဈ ကနျြသေးတယျဆိုကွပါစို့ - ဒီအစိုးရသကျတမျးမှာ။ နောကျ ဆကျရငျလဲ ဆကျမှာပေါ့။ ဒီ (၂) နှဈအတှငျးမှာ ဝနျကွီးခြုပျ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ကနြျောတို့ ပွောနတော ဘယျနှဈရာခိုငျနှုနျးလောကျ တကျလာတယျဆိုတာမြိုး ကိနျးဂဏနျးအရ တိုငျးဒသေကွီးတခုလုံးအနနေဲ့ ခွုံပွောလို့ရတဲ့ အနအေထား ရှိပွီလား။
ဖွေ ။ ။ ပွောဖို့တော့ ခဲယဉျးပမေယျ့ ကနြျောတို့ မွို့နယျတှေ သှားတဲ့အခါမှာ ပွညျသူနဲ့ တှဆေုံ့ပှဲတှမှော ပွောတာတှေ အသံတှေ ပွနျကွားရပါတယျ။ ဝနျကွီးခြုပျကိုယျတိုငျ စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍကို လုပျနတေယျဆိုတာကို သူတို့သိတယျ။ တျောတျောမြားမြား ကနြေျာ့နားထဲကို ပွနျရောကျတယျ။ ရောကျတဲ့အခါမှာ ရောကျတိုငျးလဲ ကနြျောသှားတဲ့နရောတိုငျးမှာလဲ မေးပါတယျ။ ဝနျကွီးခြုပျကို မမွငျဘူးလို့လား။ သို့မဟုတျ ကနြျောတို့ လုပျရပျကို သိခငျြလို့လား မေးတဲ့အခါမှာ တခြို့က နှဈခုစလုံးဖွတေယျ။ တခြို့ကလဲ ဒီလုပျငနျးကို စိတျဝငျစားလို့ လာပါတယျလို့ပွောတယျ။ အဲဒီတော့ အရငျထကျစာရငျ (၂၆) မွို့နယျဟာ တောငျသူတှကေတော့ စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍကို ကနြျောတို့အစိုးရက ဦးစားပေးဆောငျရှကျနတေယျ။ ကနြျောကိုယျတိုငျလညျး ပါဝငျဆောငျရှကျနတေယျ။ ဒီလိုလုပျရငျ ဒီလိုဖွဈပါလားဆိုတဲ့ အသိကတော့ ကနြျော ရာခိုငျနှုနျးနဲ့ တိတိကကြ မပွောနိုငျပမေယျ့ တောငျသူတှထေဲမှာ တျောတျောလေးတော့ ရောကျနပွေီလို ပွောနိုငျပါတယျ။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းက တောင်သူတွေ ဝင်ငွေတိုးအောင်နဲ့ လယ်ယာကဏ္ဍ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ဆောင်မှုတွေ အခုချိန်မှာ ဘယ်လောက်ထိ အောင်မြင်ခရီးရောက်နေပါပြီလဲ။ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရရုံးစိုက်ရာ ပုသိမ်မြို့မှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးလှမိုးအောင်,ကို၊ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် လယ်ယာမြေကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အတတ်ပညာကို သင်ယူခဲ့တဲ့လူလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ထဲမှာ ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တော့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဝန်ကြီးချုပ်မိန့်ခွန်းထဲမှာ ပြောသွားတာကို ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်။ ဆိုတော့ ဧရာဝတီတိုင်းဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ စပါးအထွက်ဆုံးဒေသ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ စပါးကျီဆိုပြီးတော့လည်း တင်စားပြောဆိုကြတယ်။ လယ်ယာကဏ္ဍဟာ အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ဝန်ကြီးချုပ်က ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘွဲ့ရထားတဲ့လူလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒီဟာတွေကို တလျှောက်လုံး လုပ်လာတယ်ဆိုတော့ ပိုပြီးတော့ အလျင်သင့်သလို ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ပြောထားတော့ လယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လယ်သမားတွေဘဝ မြှင့်တင်ရေးကိစ္စမှာ ဝန်ကြီးချုပ် ပြောထားတဲ့အတိုင်း ဘယ်လောက်အထိများ ဝန်ကြီးချုပ် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးပြီလဲဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ ကျနော် တာဝန်ယူထားတဲ့ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဧရာဝတီတိုင်းထဲမှာဆိုရင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးမြေ ဧက (၃၇) သိန်း ရှိပါတယ်။ (၃၇) သိန်းကို ကျနော် စတာဝန်ယူတဲ့နှစ်မှာပဲ မြေမှာ ချဉ်ငန်ဓါတ် ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ အဓိက Major Element ခေါ်တဲ့ nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) တွေဟာ ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မသိဘဲနဲ့ စိုက်ပျိုးနေရင် အလွယ်တကူ ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ မှန်းစိုက်ပြီးတော့ အလွယ်တကူ စိုက်တယ်လို့ပဲ ပြောလို့ရမယ်။ ဒီနေ့ သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်ကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာ သိပ္ပံနည်းကျဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက နည်းနည်းလွဲနေတယ်လို့ ထင်တယ်။ ကျနော် စိုက်ပျိုးရေးကျောင်းဆင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျနော့်အမြင်အရဆိုရင် ဒါက စပြီးတော့ စိုက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီမြေမှာ မြေရဲ့ PH လို့ခေါ်တဲ့ ချဉ်ငန်ဓါတ် ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ နောက်တခါ အဟာရတန်းဖိုးတွေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာတွေ သိဖို့လိုပါတယ်။ သိရင် များရင် ကျနော်တို့ လျှော့ရမယ်။ လိုအပ်ရင် ဖြည့်ပေးရမယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက် စတဲ့နှစ်မှာ ဧက (၃၇) သိန်းထဲက ဧက (၉) သိန်းကျော် (၁၀) သိန်းနီးပါးကို PH စမ်းခိုင်းပါတယ်။ NPK စမ်းခိုင်းပါတယ်။ စမ်းခိုင်းပြီးတော့ တောင်သူ ဧက (၅၀) ကို တစ်ကွက်၊ တစ်ခါစမ်းတယ်။ အဲဒီတောင်သူတွေမှာ PH ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ သူတို့မြေ ဧက (၅၀) က Detail တစ်ဧကချင်းတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဧက (၅၀) ကို Focus လုပ်လိုက်ပြီးတော့ အဲဒီမှာ PH ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ N ဘယ်လောက်၊ P ဘယ်လောက်၊ K ဘယ်လောက် ရှိသလဲဆိုတာကို စာအုပ်လေးထဲမှာ ရေးပေးပါတယ်။ မှတ်တမ်းပြုပြီး PH နည်းနေတယ်ဆိုရင် neutral point က PH 7. ကို မရောက်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လို Treatment ပေးရမယ်ဆိုတာကိုလည်း Instruction တစ်ခါတည်း ပေးထားပါတယ်။
NPK မှာလည်း --နည်းနေရင် ဘာလုပ်ပါ။ များနေရင် ဘာလုပ်ပါ။ အဖြေက Color လေးတွေ ပါပါတယ်။ အဝါဆိုရင် သူက Level ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ လိမ္မော်ရောင်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ရှိတယ်။ အနီက ဘယ်လောက်ရှိတယ်။ သူ့ရဲ့ သင်္ကေတလေးတွေ ပါတယ်။ အဲဒီသင်္ကေတပေါ် မူတည်ပြီး နည်းနေတယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်ပါ။ ဘယ်လောက်ထည့်ပါ။ အဲဒါမျိုး ကျနော်က လမ်းညွှန်ပါတယ်။
ကျနော် အခု (၂) နှစ်နီးပါး ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ဒီနှစ် ပြီးခဲ့တဲ့နွေထဲက တောင်သူအကုန်လုံး လက်ထဲမှာ အဲဒီစာအုပ်လေးတွေ ရောက်နေပါပြီ။
အဓိက Main က စပါး။ အဲဒီတော့ ဒီစပါးက လက်ရှိအချိန် နိုင်ငံခြားကို တင်ပို့တဲ့အခါမှာ ဈေးကောင်းမရဘူး။ မနှစ်ကဆိုရင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆန်တန်ချိန် ၃.၆ သန်းကို တရုတ်က ဝယ်ခဲ့တယ်။ ဒီနှစ် မဝယ်တော့ဘူး။ အဲဒီလို မဝယ်တော့ တရုတ်ပဲ ရောင်းမှာလား။ ကျနော်တို့က ဒီအပြင်နိုင်ငံတွေကိုလည်း ရောင်းချမယ်။ အဲဒီတော့ ဈေးကွက်ရှာတဲ့နေရာမှာ ဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင် ပစ္စည်းအရည်အသွေး အရေးကြီးတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမှ ရောင်းရတော့မှာ။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ ဝန်ကြီးချုပ်တို့ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကနေ တောင်သူတွေကို ဖြန့်ထားတဲ့ လမ်းညွှန်၊ လမ်းပြမြေပုံလို စာအုပ်ကလေး၊ ညွှန်ကြားချက်စာအုပ်ကလေးတွေအပေါ် တောင်သူတွေ ပိုပြီးသိရှိနားလည်အောင် Awareness သူတို့ဘက်က ပိုပြီးလိုက်နာနိုင်အောင် ဝန်ကြီးချုပ်တို့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း၊ စနစ်တကျ လိုက်နာနိုင်အောင်၊ ဝန်ကြီးချုပ်ပြောတယ် - ဝန်ကြီးချုပ် သွားရင်လာရင်နဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့ရင်နဲ့ ပြောပြတာတွေရှိတယ်။ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေ သွားရင်လာရင်နဲ့လည်း ပြောပြတာရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ တစုတဝေးတည်း အကုန်လုံး သိရှိနိုင်အောင် စနစ်တကျ Awareness Campaign လိုမျိုး ပုံစံမျိုးလုပ်တာ ရှိသလား။ ဝန်ကြီးချုပ်တို့ ဒီဟာကို တောင်သူတွေက ဘယ်လောက်အထိ နားလည်တယ်လို့ ပြန်ကြားရသလဲ။ သူတို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သိရှိပြီလို့ ဝန်ကြီးချုပ်တို့ သိသလား။ အဲဒါက သူတို့ရဲ့ စပါးထွက်လာခြင်းနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်တို့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ Good Intent တကယ့်စေတနာနဲ့ လုပ်ပေးတဲ့ဟာရဲ့ ရလဒ်က အဲဒီအပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်။ သူတို့နားလည်ခြင်း၊ နားမလည်ခြင်းပေါ် မူတည်နေတယ်လို့ ထင်မြင်သလား။
ဖြေ ။ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်က ဒီလိုလုပ်ခြင်းက သူနဲ့မြင့်တဲ့ နည်းပညာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တောင်သူတွေဆိုတာ မြင်မှ၊ လက်တွေ့ပြမှာ ယုံတာဆိုတော့ အခု ဖျာပုံမှာ ပေါ်ဆန်မွှေးဆိုရင် အဲဒီက တောင်သူတွေ ပြောကြတယ်။ အရင်တုန်းက ပေါ်ဆန်မွှေး ပြန်ရပြီ။ အဲဒီတော့ အခြေအနေပေးကြမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ Level တစ်ခုကိုတော့ တက်လာတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလိုလုပ်ရင် ဒီလိုဖြစ်ရင်၊ အထွက်တိုးပါလား။ အရည်အသွေး ကောင်းပါလားဆိုတဲ့ Message က တောင်သူတွေလက်ထဲ တော်တော်များများဆီ ရောက်နေတယ်။ အဲဒီလို ရောက်နေချိန်မှာ ကျနော်တို့က အခုချိန်မှာ --- သွားမလားဆိုတာ အလွယ်တကူ ဖြစ်လာတယ်။ ထူးခြားတာက ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ စိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီတွေ အများကြီး။ နက်နက်နဲနဲတော့ ကျနော်တို့ သိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီတွေမှာ ဘာလဲဆိုတော့ Pre စိုက်ပျိုးရေးတွေနည်းတယ်။ Post-harvesting မှာ များတယ်။ ဆန်စက်-အကြောင်းသိတယ်။ အခြောက်ခံဖို့ သိတယ်။ နောက်ပိုင်းအကြောင်းအရာတွေကို သိတယ်။ ရှေ့ပိုင်းအကြောင်းအရာတွေကို မသိဘူး။ နောက်ဆုံး တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်ဖို့ Contract Farming Company တော်တော်နည်းတယ် (၅) ရာခိုင်နှုန်း မရှိဘူး။
မေး ။ ။ ဝန်ကြီးချုပ်တော့ ကြားဖူးသလား မသိဘူး။ ကျနော် ကြားသိဖူးတာက ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင် Pre-harvesting နဲ့ Post-harvesting တွေ ဝန်ကြီးချုပ် ပြောလို့ပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာ ကျနော် ကြားဖူးတာက ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင် Pre-harvesting နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက တော်တော်လေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံကြတယ်။ လယ်သမားတွေကို စပါးမစိုက်ခင်မှာ ငွေထုတ်ပေးတယ်။ မျိုးကောင်းရဖို့ကိစ္စတွေ၊ ရေကောင်းရေသန့်ရဖို့ ကိစ္စတွေ၊ အထွက်တိုးဖို့ကိစ္စတွေကို သူတို့က တော်တော်လေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံတယ်။ ထွက်လာပြီဆိုရင်လဲ အဲဒီစပါးတွေကို သူတို့ပဲ ပြန်ဝယ်တယ်။ လယ်သမားတွေဆီက ထွက်လာတဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံကောင်းမှ သူတို့လည်း ဈေးကောင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားကို ပြန်ပြီးတော့ ပို့နိုင်မှာဆိုတော့ သူတို့က အဲဒီနည်းနဲ့သွားကြတယ်လို့ ကျနော်သိရတယ်။ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စောစောက ဝန်ကြီးချုပ်ပြောသလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ အားနည်းချက်ရှိနေတာ Pre-harvesting မှာ ဝန်ကြီးချုပ်က မြင်တယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီကဏ္ဍကို သိထားတဲ့လူဆိုတော့ အဲဒီဘက်မှာ ဆိုကြပါစို့ ဧရာဝတီတိုင်းက စံနမူနာပေးပြီး၊ စံပြအနေနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ပြောခဲ့သလို ဧက (၅၀) Focus လုပ်သလိုမျိုး တတိုင်းလုံးမှာ အထွက်တိုးလာအောင် လုပ်သလိုမျိုး၊ Pre-harvesting ဝန်ကြီးချုပ် အစိုးရက ဦးဆောင်ပြီး တခုခုလုပ်ပြရင်ပေါ့။
ဖြေ ။ ။ အခုန ဆရာပြောတဲ့ဟာက ကျနော်ပြောတဲ့ ဧကတစ်သောင်းလောက် လုပ်နေတယ်ဆိုတာ Contract Farming လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အကျိုးတူလုပ်ငန်း။ အဲဒီလုပ်ငန်းမျိုးနဲ့ လုပ်ကြရင် သားရွှေအိုးထမ်းသလိုမျိုး ကုမ္ပဏီနဲ့ တောင်သူအပေါ်မှာ သစ္စာရှိရမယ်။ ယုံကြည်မှု ရှိရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကုမ္ပဏီက မျိုးစေ့ပေးတယ်။ Inputs တွေ ပေးတယ်။ နောက်တခါ ရတဲ့ဟာကို တောင်သူက မပို့ရဘူး။ ကျနော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ Contract Farming ဆိုရင် အနည်းဆုံး ငါးထောင်ဈေး ဖြစ်ရမယ်။ ကြမ်းခင်းဈေး ငါးထောင်ပေးမယ်။ ငါးထောင်ဈေး ဖြစ်နေရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ မဖြစ်ဖြစ် ငါးထောင်ဈေးကို သတ်မှတ်ထားတယ်။ အဲဒါဆို ငါးထောင်ငါးရာဈေးပေးမယ်။ သူနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲတက်တက်၊ ငါးရာ-ငါးရာ ပိုပေးမယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ Contract လုပ်ထားတဲ့အတိုင်း ဝယ်မယ်။ တောင်သူက သူတို့ကို သစ္စာရှိရှိနဲ့ ရောင်းဖို့ အရေးကြီးတယ်။
မေး ။ ။ ဒီသဘောတူညီချက်ကို မချိုးဖောက်နဲ့။ တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုလုံးကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဝန်ကြီးချုပ် ဒါတွေကို အစမ်းလုပ်လာတာ (၂) နှစ်ကာလသက်တမ်း ရှိလာပြီ။ နောက်ထပ် (၁) နှစ် ကျန်သေးတယ်ဆိုကြပါစို့ - ဒီအစိုးရသက်တမ်းမှာ။ နောက် ဆက်ရင်လဲ ဆက်မှာပေါ့။ ဒီ (၂) နှစ်အတွင်းမှာ ဝန်ကြီးချုပ် ယေဘုယျအားဖြင့် ကျနော်တို့ ပြောနေတာ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက် တက်လာတယ်ဆိုတာမျိုး ကိန်းဂဏန်းအရ တိုင်းဒေသကြီးတခုလုံးအနေနဲ့ ခြုံပြောလို့ရတဲ့ အနေအထား ရှိပြီလား။
ဖြေ ။ ။ ပြောဖို့တော့ ခဲယဉ်းပေမယ့် ကျနော်တို့ မြို့နယ်တွေ သွားတဲ့အခါမှာ ပြည်သူနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ ပြောတာတွေ အသံတွေ ပြန်ကြားရပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကို လုပ်နေတယ်ဆိုတာကို သူတို့သိတယ်။ တော်တော်များများ ကျနော့်နားထဲကို ပြန်ရောက်တယ်။ ရောက်တဲ့အခါမှာ ရောက်တိုင်းလဲ ကျနော်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလဲ မေးပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ကို မမြင်ဘူးလို့လား။ သို့မဟုတ် ကျနော်တို့ လုပ်ရပ်ကို သိချင်လို့လား မေးတဲ့အခါမှာ တချို့က နှစ်ခုစလုံးဖြေတယ်။ တချို့ကလဲ ဒီလုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားလို့ လာပါတယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒီတော့ အရင်ထက်စာရင် (၂၆) မြို့နယ်ဟာ တောင်သူတွေကတော့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကို ကျနော်တို့အစိုးရက ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရင် ဒီလိုဖြစ်ပါလားဆိုတဲ့ အသိကတော့ ကျနော် ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တိတိကျကျ မပြောနိုင်ပေမယ့် တောင်သူတွေထဲမှာ တော်တော်လေးတော့ ရောက်နေပြီလို ပြောနိုင်ပါတယ်။